Izicelo eziyi-8 ze-Android Zokuxoxa Nabangani | Izindaba zamagajethi
Izicelo eziyi-8 ze-Android zengxoxo noma ingqungquthela yevidiyo
Ukube besinethuba lokubuyekeza leyo midlalo yakudala yochungechunge lwethelevishini (isayensi eqanjiwe), besizokwazi ukubona ukuthi ezinye zezigcawu zabo zifana kakhulu nalokho esiphila kulo namuhla. Ukuxhumana ngebanga elide phakathi kwabantu abaningana kwaba ukukhanga okuyinhloko kwalolu chungechunge, into eyayingathathwa njengokungathi kwakuyinkomfa yevidiyo exhumene.
Ngokusobala asikho kule ndawo kepha kunalokho, emhlabeni wethu wangempela lapho inani elikhulu lamadivayisi eselula (isikhathi ngasinye, ngosayizi omncane) avele ngesandla samafemu ahlukile okukhiqiza. Ngokwabo besingabona ingxoxo noma ividiyo yengqungquthela yomsebenzi noma umsebenzi, okuthile okujulisiwe ikakhulukazi kulabo abane-Android operating system; Ngalesi sizathu, manje sizokhuluma kafushane ngezicelo eziyi-8 ngalolu hlelo lokusebenza ongalusebenzisela lolu hlobo lomsebenzi.
1 I-1. I-Skype
2 2. Ukuthosa
3 3. Ithango
4 4. ooVoo
5 5. Ama-Hangout we-Google +
6 I-6. Viber
7 7. I-KakaoTalk
Akungabazeki ukuthi le yisevisi esetshenziswa kakhulu ngabantu abehlukene, ngenxa yokuthi leli thuluzi liyatholakala ngezinombolo ezahlukene zamapulatifomu; ngale ndlela, ukuze Skype Ungaba nayo kumadivayisi eselula e-Android, kwi-iPad, kuma-Mac noma kumakhompyutha we-PC phakathi kokunye okumbalwa. Ngaphezu kwalokhu, inkulumo noma ingxoxo ingenziwa usebenzisa ukuxhumeka kwedatha noma i-Wi-Fi engenantambo.
Le ndlela ithathwa njengenye yezinto ezihamba phambili kubantu abaningi, ngenxa ye- ikhwalithi yesithombe enhle oyithola enkulumweni yenkomfa yevidiyo; NjengoSkype, lapha ungahlela nezinkulumo zeqembu noma ezingazodwana, ezizoncika kwisidingo ngasinye. Uma unenethiwekhi engenantambo ye-Wi-Fi kuphela, ungayisebenzisela ukugwema ukusetshenziswa kwedatha ngokweqile ekuxhumekeni kwe-3G.
cunt tango abasebenzisi bayo bangasebenzisa izingcingo zevidiyo noma izingcingo zezwi kuphela. Ukuba isicelo samahhala se-Android, abasebenzisi bayo basebenzisa lesi sici ukuze bakwazi thumela imiyalezo ebhaliwe ngisho nezithombe ezifakiwe kuyo. Ithuluzi lihambisana namanethiwekhi we-3G, 4G ne-Wi-Fi.
Phakathi kwezinzuzo ezibaluleke kakhulu esinikeza zona ooVoo, kungenzeka bamba izinkomfa zevidiyo ezingafika kumalungu ayi-12 Kuba yisizathu esiyinhloko esenza abaningi bayisebenzise. Ngaphezu kwalokhu, izingcingo zevidiyo, izingcingo zezwi, imiyalezo kanye neminye imisebenzi embalwa yilezo ezifakiwe kulolu hlelo lwe-Android.
5. Ama-Hangout we-Google +
Muva nje, I-Google + Hangouts Isetshenziswa inani elikhulu labantu kumakhompyutha abo futhi nakanjani, kumadivayisi eselula e-Android. Ngale nsizakalo unethuba lokuxoxa eqenjini, noma kunjalo umkhawulo wethuluzi uphakamisa abasebenzisi abangu-9 kuphela. I-Google + Hangouts ijwayele ukusetshenziswa njalo ngoba lolu hlelo lokusebenza lwe-Android lufakwa ngokuzenzakalela kumadivayisi weselula ahlukile ngalolu hlelo lokusebenza.
Kukhona cishe abasebenzisi abayizigidi ezingama-460 abasebenzisa lolu hlelo lokusebenza lwe-android, etholakala ngohlobo olukhethekile lwe-iPhone, iBlackBerry kanye nomakhalekhukhwini abaneWindows Phone; phakathi kwezinzuzo zayo ezinkulu kakhulu kungenzeka thumela imiyalezo, shaya izingcingo zomsindo, thumela izithombe nakuba, lolu hlelo lokusebenza lwe-Android alunikezi ithuba lokwenza izingqungquthela zamavidiyo.
A I-KakaoTalk isetshenziselwa ukwenza amakholi womsindo wamahhala nokuthumela imiyalezo. Ungafinyelela futhi Hlela izingcingo zomsindo weqembu ngalolu hlelo lokusebenza lwe-Android. Phakathi kwezici zayo ezingeziwe, ngayo unethuba lokuhlanganisa izithonjana ezinopopayi kanye nokusetshenziswa kwezitika ezimbalwa njengengxenye yomyalezo. Abasebenzisi abalinganiselwa ezigidini eziyi-150 basebenzisa leli thuluzi, elitholakala kuwo womabili amadivayisi eselula e-Android, ane-iOS, iWindows Phone, iBlackBerry neBada OS.
cunt leli thuluzi sizophinde sibe nethuba lokuthi yenza izingcingo zezwi zamahhala futhi uthumele imiyalezo kubo bonke oxhumana nabo nabangane bethu. Itholakala emazweni angaphezu kuka-230 futhi ibhekwa njengenye yezinhlelo zokusebenza ezihamba phambili ze-Android emhlabeni jikelele. Mhlawumbe okuwukuphela kwento ebuyayo enanini elikhulu lezaziso insizakalo evame ukuzithumela kubo bonke abasebenzisi bayo.
Ngalezi zincomo eziyi-8 esizinikezile, ezinye zazo zingaba nentshisekelo kuwe, okuthi kuzoya kakhulu ngohlobo lwedivayisi yeselula onayo ezandleni zakho kanye nohlobo lohlelo lokusebenza oluhlanganiswe kuzo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Izicelo eziyi-8 ze-Android zengxoxo noma ingqungquthela yevidiyo
Amawebhusayithi ayi-10 wokuLanda ama-eBooks wamahhala
Amathuluzi we-7 okumele-ube nawo wokuthatha inothi ku-Android